Guddiga Doorashooyinka KMG ah Puntland oo gaarey deegaaano katirsan Gobolka Sool. – Radio Daljir
Oktoobar 1, 2012 1:44 g 0
Boocame, Oct 01 – Xubno katirsan ?Guddiga KMG ah ee doorooshinka Puntland oo uu hogaaminayay Axmed Maxad Axmed ?’Dubeys ayaa ?Kormeero ?lagu ?dar dar galinayo howlaha Doorashooyinka ?iyo nidaamka Xisbiyaha badan ee golayaasha dowladda hoose waxa ay ku gaareen deegaano ay kamid yiuhiin demooyinka Tukaraq, Boocame iyo Tuulooyinka ku Dhaw dhaw ee gobolka Sool
Markii guddigu gaareen degmada Boocame ee gobolka Sool ?waxaa kusoo dhaweeyay waxgaradka ?iyo odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi, waxaana halkaasi ay kulama kula qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada, Iyagoona kulankaasi ?uu ahaa ?mid guddiga ku wacyi galinayay sidii looga qeyb qaadan lahaa ka qeyb galka nidaamka dimuqraadiyeed ee Puntland ugubtay.
Axmed Maxaed Axmed ‘ Dubeys’ oo kahadlay kulankaasi ayaa sheegay in guddigooda loo xilsaaray gaarista degmooyinka gobolka Sool kuwooda laga sameynayo doorashooyinka golayaasha dowladda hoose ee nidaamka xisbiyada Puntland, Waxaa odayaasha iyo iyo qeybaha kale buslahada reer Boocame uu tafaasiil dheer iyo faham guud ka siiyay ?nidaamka axsaabta badan Puntland u hayaantay.
Cabdi Rashiid Diriye Cisman ?oo kamid ah odayaasha Degmada ?Boocame ee gobolka Sool oo kulankaasi kahadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan nidamankadimuqraadiyeed ee loo gudbayo taasi oo oo uu sheegay in ay faaido utahay deegaanada ka darugsan wadada lamaiga ah.
Dhinaca kale guddiga doorooshinka Puntland ee gobolka Sool waxaa kale oo ay gaareen degmada Tukaraq ee gobolka Sool halkaasi oo sidoo kale ay kulamo kula qaateen waxgaradka iyo qeybaha bulshada.
Kulanka ka dhacay degmada Tukaraq waxaa kahadlay Caaqil Faarax Cabdi Shire oo kamida ah waxgaradka Tukaraq, Waxaana uu sheegay in dhinacooda ay ?dhaweeyanayaan guddiga uu hogaaminayo Axmed Maxaed Axmed ‘ Dubeys’ oo kamid ah guddiga KMG ah ee doorashouyinka Puntland ?ee wacyi galinta u yimid gobolka Sool.
Si kastaba ha ahaatee gobolada iyo degmooyinka Puntland waxaa heer gabagabo ah sii maraya kormeerada guddiga doorashooyinka KMG ah ?ee Puntland uu kawada wacyi galinta la xiriira ?baahinta iyo taabo galinta nidaamka dimuqraadiyeed ee Puntland.
Halkaan ka dhagayso Caaqil Faarax Cabdi Shire oo ka hadlay shirkii ay la qaateen xubnii guddiga kumeel-gaarka ah ee doorashooyinka Puntland